Fiantsonana eto Antananarivo : mandoa lamandy izay tsy manara-dalàna | NewsMada
Fiantsonana eto Antananarivo : mandoa lamandy izay tsy manara-dalàna
Par Taratra sur 11/02/2016
Mbola ao anatin’ny fotoana fampianarana ny mponin’Antananarivo ny kaominina miaraka amin’ny orinasa mpiara-miombon’antoka, Easy Park amin’ny fanajana ny fampiasanan ny toeram-piantsonan’ny fiara.
Io no fanazavana nentin’ny tompon’andraikitra omaly nandritra ny resaka nifanaovana taminy. Ampianarina mandoa saran’ny fiantsonana ary ampianarina manara-dalàna ny olona ety am-piandohana.
Raiketin’ny tompon’andraikitra anaty solosaina avokoa ny laharan’ny fiara fantatra fa nanao fahadisoana ety am-piandohana. Tsy mbola saziana aloha izy ireo fa ampahafantarina azy ny tokony hatao. Iharan’ny fandoavana lamandy kosa raha manao fahadisoana miverina raha ny filazan’ny tompon’andraikitra.
Anisan’ny voafaritra ao anaty ny rafitra tokony hanasaziana ny tsy fandoavam-bola saran’ny fiantsonana. 12.000 Ar ny vola aloa ary tafakatra 30.000 Ar izany raha tsy aloa ao anatin’ny 15 andro. Miakatra hatrany amin’ny 50.000 Ar kosa raha tsy efaina anatin’ny 45 andro
Mitentina 35.000 Ar kosa ny lamandy aloa raha vao manelingelina na mibahana ny toeran’ny fiara eo amin’ny fiantsonana. Mihafara hatramin’ny fanagiazana fiara ny sazy raha vao miziriziry tsy mandoa ny vola ao anatin’ny volana iray mahery.
Manomboka hatramin’ny 120.000 Ar ka hatramin’ny 600.000 Ar kosa ny lamandy raha vao miantsona eo amin’ny toerana efa voatokana na efa voafandrik’ireo mpivarotra na orinasa amoron-dalana ny fiara. Mihafara amin’ny fanagiazana ny fiara ihany koa izany raha tsy efaina.
Raha eo amin’ny fiantsonan’ny taxi na amin’ny toerana mampidi-doza kosa no mijanona ny fiaran’olon-tsotra iray, manomboka amin’ny 15.000 Ar ny lamandy aloa. Tafakatra hatrany amin’ny 600.000 Ar izany arakaraka ny fotoana tsy anefan’ny tompon’ny fiara ny vola.
Azo aloa amin’ny alalan’ny “horodateur” ao anatin’ny 15 andro nahazoana ny taratasy fanasaziana ny lamandy saingy raha miohatra ny 15 andro kosa, tsy maintsy manatona ny birao eny behoririka ny tompon’ny fiara mandoa ny lamandiny.